Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Medical Facts ဆေးပညာအချက်အလက်များ
Medical Facts ဆေးပညာအချက်အလက်များ
• The average red blood cell lives for 120 days. သွေးနီဥသည် ပျမ်းမျှ ရက်ပေါင်း ၁၂ဝ အသက်ရှင်သည်။
• There are 2.5 trillion (give or take) of red blood cells in your body at any moment. To maintain this number, about two andahalf million new ones need to be produced every second by your bone marrow. သင့်ကိုယ်ထဲမှာ သွေးနီဥပေါင်း ၂့၅ ထွီလီယန်ရှိသည်။ စက္ကန့်တိုင်းမှာ သွေးနီဥအသစ်ပေါင်း ၂့၅ သန်း ထုတ်ပေးနေသည်။
• Considering all the tissues and cells in your body, 25 million new cells are being produced each second. စက္ကန့်တိုင်းမှာ တစ်ရှူးအသစ်နှင့် ဆဲလ်အသစ်စုစုပေါင်း ၂၅ သန်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
• Our lungs inhale over two million litres of air every day, without even thinking. သင့်အဆုပ်သည် နေ့စဉ် လေ လီတာ ၂ သန်းကို ရှူနေသည်။
• Our eyes can distinguish up to one million colour surfaces and take in more information than the largest telescope known to man. သင့်မျက်စိသည် အရောင် ၁ သန်းကိုခွဲမြင်နိုင်ပြီး၊ လူတည်ထွင်သော အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းမှန်သမျှ ထက်သာသည်။
• Our blood is ona60,000-mile journey. သင့်သွေးသည် မိုင် ၆ဝဝဝဝ ခရီးသွားနေခြင်းဖြစ်သည်။
• Our heart beats around 10000 times every day. သင့်နှလုံးသည် တနေ့လျင် အကြိမ် ၁ဝဝဝဝ ခုန်နေသည်။
• A red blood cell can circumnavigate your body in under 20 seconds. သွေးနီဥတခုသည် သင့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲ လှည့်လည်ရန်အချိန် ၂ဝ စက္ကန့်ထက်နည်းသည်။
• Nerve Impulses travel at over 400 km/hr. အာရုံကြော၏တုံ့ပြန်မှုမှာ ၁ နာရီ ၄ဝဝ ကီလိုမီတာနှုန်းမြန်သည်။
• A sneeze generatesawind of 166 km/hr, andacough moves out at 100 km/hr. သင်နှာခြေခြင်းမှာ ၁ နာရီ ၁၆၆ ကီလိုမီတာနှုန်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းသည် ၁ နာရီ ၁ဝဝ ကီလိုမီတာနှုန်းရှိသည်။